यसकारण प्रधानमन्त्री ओली दुवै पदबाट नहट्ने ! - १९ असार २०७७, NepalTimes
यसकारण प्रधानमन्त्री ओली दुवै पदबाट नहट्ने !
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नै पार्टीबाट राजीनामाको दबाब आए पनि उनी प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट बाहिरिने सम्भावना छैन । उनले राजनीतिक रूपमा नै दबाबको सामना गर्ने गरी आफूलाई तयारी अवस्थामा राखेको उनी निकटकाले बताएका छन् ।
पार्टीमा दबाब खेपे पनि प्रम ओलीले सरकार सञ्चालनका नियमित कार्यलाई जारी राखी विरोधी खेमाका नेताहरूलाई सरकाकारबाट कुनै पनि हालतमा ‘ब्याक’ नहुने सन्देश दिएका छन् । सोही सन्देशस्वरूप उनले बिहीबार आकस्मिक रूपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक राखी जारी संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे । लगत्तै राष्ट्रपतिबाट संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा भयो ।
प्रम ओलीले आफ्नै पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा आरोप खेपे पनि सरकार र अध्यक्ष दुवै पद त्याग्न नपर्ने आधारहरूको खोजी गरेका छन् । उनले दबाबको सामना गर्न शीर्ष तहमा नै छलफल अघि बढाएका छन् । स्थायी कमिटी बैठकमा आपूmविरुद्ध उभिएका नेताहरूलाई समेत छलफलमा सहभागी गराई उनले सहमति र सहकार्यको बाटो रोजेका छन् ।
दुवै जना पार्टी अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरविना पार्टीका कुनै पनि निर्णय आधिकारिक नहुने पार्टी एकताको क्रममा भएको समझदारीले उनलाई दुवै पदमा टिक्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यस्तै, राष्ट्रियताका पक्षमा ओलीले देखाएको अडानले पनि उनको पक्षमा छुट्टै माहोल बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओली वर्षौंदेखि भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण हुँदै आएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्सा जारी गरी संविधानमा राख्न सफल भएका थिए ।
पार्टी एकतापछि पार्टीलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउने संकल्प गरेका ओली–दाहालबीच असमझदारी बढ्दा पार्टीका संरचना अन्योलमा छन् । ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन भएको विभिन्न कसरत अन्ततः ओली–दाहालमा नै गएर सहमति भई रोकिने देखिएको छ । ओली र दाहालको सहमतिविना पार्टीको कुनै पनि निर्णय हुन नसक्ने प्रावधानले दुवैलाई एक ठाउँमा बाँधेको छ ।
संसदीय दलबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने प्रयास गरिए पनि सो प्रयास पनि असफल हुने देखिन्छ । ओली नै दलका नेता छन् भने उनका विश्वासपात्र सुवासचन्द्र नेम्वाङ उपनेता छन् । संसदीय दलबाट ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने बाटो नै बन्द भएकाले पनि उनी मजबुत अवस्थामा रहेको पाइएको छ ।, याे खबर राजधानी दैनिकमा छ ।
गुणस्तरीय छैन पिउने पानी
अब बीस मिनेटमै कोरोना परीक्षण !
आफन्तबाटै छोरीचेली असुरक्षित हुन थालेपछि समुदाय आतंकित
मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा परेकालाई विदेश जान बाधा
अर्का बिरामीको मृत्युपछि डायलासिस पालो
सलबलाए राजावादी : राजाको पक्षमा शक्ति प्रदर्शन हुँदै
तीन हजार किलोमिटर सडक मर्मत गरिँदै
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा कोभिडको असर बारे अध्ययन गरिने
ओली र दाहाल आमने सामने, दुबैका प्रस्तावमा छलफल सुरु
प्रदेश १ मा थपिए १७९ नयाँ संक्रमित, ९२ जना डिस्चार्ज
अर्थमन्त्रीको ‘वर्थ डे’ सेलिब्रेसन (फोटो फिचर)
थप २१ संक्रमितको मृत्यु, १३०४ नयाँ संक्रमित थपिँदा २०७३ डिस्चार्ज
त्रिवि अन्तर्गतका सबै क्याम्पसहरुमा भौतिक रुपमै नियमित पठनपाठन हुने
बर्दिवास घटनामा दुई प्रहरी जिल्ला तानिए, छानबिन समिति महोत्तरी पुग्दै
वर्ष शब्द २०२० बन्यो ‘प्यान्डेमिक’